सबैलाई वास्तविकता को प्रतिबिम्ब एक व्यक्ति परिदृश्य मा बसोबास। अरूलाई पर्याप्त उज्जवल छैन विचार गर्दा, केही घाम लागि बालुवा बीचमा फूल को द्वीप - एक मरुभूमिमा, अन्य देख्न सक्छौं। सबैसँग, एउटै अवस्था फरक देख्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई मानसिक प्रक्रियाहरू महत्त्व निर्भर - सोचाइ। हामी, मूल्याङ्कन, तुलना गर्नुहोस्, उहाँलाई गणितीय सञ्चालन धन्यवाद पूरा विश्लेषण।
धेरै विशेषज्ञहरु, सबै भन्दा अक्सर मनोवैज्ञानिक र psychiatrists द्वारा अध्ययन सुविधाहरू सोच। मनोविज्ञान को विमान मा, त्यहाँ वैधता र विश्वसनीयता छ कि विभिन्न परीक्षण हो। उल्लंघन, साथै सोचाइ खोज तरिका को निर्धारण लागि निदान सोच आयोजित। मनोरोग ज्ञान को आधारमा सोचाइ को रोग प्रक्रियाहरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। कि संगठित दबाइ पछि को असामान्य सञ्चालन अवलोकन गर्ने मानिसहरूलाई मदत गर्न मानसिक प्रक्रिया। के सोचाइ उल्लंघन अवलोकन गर्न सकिन्छ?
को मानसिक प्रक्रियाको वास्तविकता प्रतिबिम्बित को दर के हो?
यो दिन, धेरै विशेषज्ञहरु तर्क कसरी जटिल मानसिक प्रक्रियाहरू परिभाषित गर्न - सोचाइ। तर अहिलेसम्म कुनै पूर्ण र अर्थपूर्ण थियोसिस, यो हाम्रो मन मा बाहिर वहन कि सबै काम ढाकिएको थियो जो थियो। यो मानसिक प्रक्रिया अन्य (स्मृति कल्पना, ध्यान र धारणा) संग बुद्धि को भाग हो। सोचाइ मानव वातावरण को आत्मपुरक धारणा को विमान यसलाई स्थानान्तरणका, बाहिर बाट प्राप्त सबै जानकारी रूपान्तरणहरूलाई। वास्तविकता मानिसहरूको आत्मपुरक मोडेल व्यक्त भाषा, बोली को मद्दतले गर्न सक्छन्, अन्य प्राणीहरू उहाँलाई distinguishes के छ। यो उच्च उचित व्यक्तिगत भनिन्छ बोली मानिसलाई धन्यवाद छ।
, विभिन्न परिस्थिति Perceiving बोली मानिसको सहायता आफ्नो न्यायलाई तर्क देखाउँदै आफ्नो निष्कर्ष व्यक्त। विचार प्रक्रियाहरू सामान्यतया धेरै मापदण्ड पूरा गर्न छ।
मानिस पर्याप्त बुझ्ने र बाहिर बाट उहाँलाई आउने सबै जानकारी प्रक्रिया हुनुपर्छ।
मानव मूल्यांकन समाज लिइएका को empirical आधार भित्र हुनुपर्छ।
त्यहाँ एक छ औपचारिक तर्क, को मान्यता र सारा समाज को व्यवस्था झल्काउँछ जो राम्रो। कुनै पनि अवस्था बारे निष्कर्ष यो तर्क आधारित हुनुपर्छ।
सोच प्रक्रियाहरू अनुसार विनियमन प्रणाली व्यवस्था संग मा अगाडि बढ्न गर्नुपर्छ।
सोचाइ यो अत्यधिक संगठित छ आदिम हुनु हुँदैन, त्यसैले सामान्य साधारण संसारको संरचना स्वीकार्य अवधारणाहरु को सबै भन्दा झल्काउँछ।
यी मापदण्ड अस्तित्वको सामान्य नियम अन्तर्गत सबै मानिसहरू अनुकूलन छैन। कसैले व्यक्तित्व उठाउन् गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सामान्य रूपमा भन्दा बारेमा कुरा गर्दै छन्। परम उदाहरण: धेरै मानिसहरू 21.00 पछि खान भनेर सोच्न त सबै सामान्य दायरामा dined पछि, समावेश गरिएको छैन, हानिकारक छ। तर सामान्य मा, विचलन छलफल छैन। र सोचाइ छ। यो सोच को घोर उल्लङ्घन हो नभएसम्म औपचारिक तर्क को दुनिया को साधारण संरचना केही अमिल्दो, हुन सक्छ।
निदान को विधिहरू
कसरी आफ्नो दृष्टिकोण उन्नत स्थिरता, लचीलापन, गहिराई, महत्वपूर्ण सोचाइ, निर्धारण गर्न, यस मानसिक प्रक्रिया अध्ययन गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। चिकित्सा परीक्षा जैविक स्तरमा अब अभ्यास मा, सोचाइ विकार को निदान बाहिर छ पारंपरिक चिकित्सा उपकरण प्रयोग गरेर। तिनीहरूले रोग केन्द्र को लागि देख एक एमआरआई, EEG सञ्चालन र यति मा, फोन मार्फत हेर्न। मनोवैज्ञानिक आफ्नो काम परीक्षण सामाग्री प्रयोग। मनोविज्ञान मा विचार को निदान पनि योजना अनुगमन र प्राकृतिक वा प्रयोगशाला प्रयोग प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै भन्दा साधारण परीक्षण मानसिक गतिविधि को विशेषताहरु निर्धारण गर्न: विधि "अपवाद अवधारणाहरु," त्यसैले सोच को rigidity अध्ययन गर्न बेनेट गरेको परीक्षण र। , "Labyrinth" र अरूलाई "अन्तर स्पट" छोराछोरीको विचार विकार प्रयोग गर्न सकिन्छ, "सर्कल को आकृति" "समूह मा" निर्धारण गर्न।
उल्लंघन को कारण
हाम्रो मन मा वास्तविकता दर्शाउने एक जटिल मानसिक प्रक्रियाको उल्लंघन को कारण, सेट गर्न सकिन्छ। पनि विशेषज्ञहरु हाल मानव सोचाइ मा केही रोग परिवर्तन बारे सहमति आउन छैन। तिनीहरूले कारण जैविक क्षति, psychosis, neurosis, अवसाद गर्न खडा। प्रमुख विचलन लागि कारण विचार गर्नुहोस्।
संज्ञानात्मक विकार। तिनीहरूले कम गुणस्तर बनाउन मानसिक अपरेसन। यी विकार मानव शरीर को संगठन विभिन्न स्तर मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। सेलुलर स्तर मा, उनि यसलाई भइरहेको छ के खराब निर्णय पछि छ, वरपरका वास्तविकता बुझ्ने गर्न रोगी हस्तक्षेप। , पागलपन (कारण मस्तिष्क जहाजहरू जैविक घाउ गर्न पागलपन) यस्तो अल्जाइमर रोग रूपमा यो pathologies। यो मस्तिष्क को अस्थायी lobes असर भने बिगडा स्मृति र सोचाइ, एक व्यक्ति, सामान्य गतिविधिहरु पूरा गर्न, संगठित र वस्तुहरू कोटिबद्ध अनुमति गर्दैन हुन्छ। तपाईं त यो निर्णय र निष्कर्ष जीवनको वास्तविकताहरु संग असंगत हुन सक्छ गरिब दृष्टि व्यक्ति, विकृत जानकारी हुन्छ भने।
विचार को विकृति प्रकारका psychosis देखि Originate। यो व्यक्ति कुराहरू साधारण तर्क आधारित जानकारी व्यवस्थित गर्न सक्षम, त्यसैले अव्यावहारिक निष्कर्ष बनाउने छैन। यहाँ विचार को खण्डीकरणको क्रमलाई छ, तिनीहरूको बीचमा कुनै पनि लिंक को अभाव, साथै बाह्य मापदण्ड द्वारा जानकारी धारणा, कुनै छ सम्बद्धता पनि परिस्थिति वा वस्तुहरू बीच।
विचार सामग्रीको विकार। कारण धारणा को सिस्टम को कमजोरी गर्न (विशेष, बाह्य stimuli को परिवर्तन) त्यहाँ घटना मा वास्तविक घटनाहरु विषयमा उहाँलाई लागि ठूलो मूल्य भएको पहिचान देखि ध्यान मा "skewed" छ।
सिस्टम विनियमन को अभाव। मानिस यस्तो तरिकाले निर्माण समस्या अवस्थामा उहाँले एक तरिका को लागि बाहिर अघिल्लो अनुभव को आधार मा र जानकारी प्रक्रिया को दिइएको समयमा देख छ भन्ठानेर। सामान्यतया, प्रणाली विनियमन आफैलाई प्रश्न गरेर समस्या हेर्न र एक साधारण कार्य योजना बनाउन, एकै समयमा रचनात्मक प्रतिक्रियाहरू खोज्न, वरपरको बेचैनी देखि एक व्यक्ति disengage मद्दत गर्छ। एक व्यक्ति को विनियमन को अभाव छिटो र कुशलतापूर्वक यो अवस्था बाहिर तरिका फेला गर्न सक्नुहुन्छ। सोचाइ यस्तो उल्लंघन गर्ने निधारमा भावनात्मक अधिभार, घाइते, मस्तिष्क ट्यूमर, विषाक्त घाउ, सुनिंनु कारण हुन सक्छ।
रोग सोचाइ प्रकार
, मानसिक गतिविधि धेरै को Pathologies यो प्रक्रिया बहुमुखी किनभने। त्यहाँ सबै गुण र वास्तविकता दर्शाउने मानसिक प्रक्रियाको प्रजातिहरू जोडती जो उल्लंघन को एक वर्गीकरण छ। निम्नानुसार सोचाइ उल्लंघन को प्रकार छन्:
सोचाइ को गतिशीलता को विकृति।
सोचाइ प्रक्रियाको तर्क भाग को उल्लंघन।
को मानसिक प्रक्रियाको सञ्चालन पक्ष को विकृति
यी विकार अवधारणाहरु को समेकन को प्रक्रिया असर गर्छ। यो, यो मानिसको न्याय तिनीहरूलाई बीच तार्किक जडानहरू पीडित किनभने, पहिलो प्रत्यक्ष इन्साफ, वस्तुहरू र विभिन्न परिस्थिति को प्रतिनिधित्व आउनुहोस्। विरामीहरु सबैभन्दा सही यसको विशेषताहरु लागि सबैभन्दा उपयुक्त चयन गर्न धेरै विशेषताहरु र वस्तु को गुण को नहुन सक्छ। अक्सर, यी रोग प्रक्रियाहरू मानसिक मंदता, मिर्गी, encephalitis ग्रस्त मानिसहरू छन्।
यस प्रकारका उल्लंघन सामान्यकरण प्रक्रिया पनि विकृति द्वारा विशेषता गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, एक बिरामी व्यक्ति पर्याप्त आपसमा जोडिएको वस्तु को गुणहरू, खातामा लिन गर्दैन। वस्तुहरु र घटना बीच मात्र अनियमित विशेषताहरु कुनै जडान साधारण सांस्कृतिक स्तर मा आधारित चयन। त्यहाँ पागलपन र psychopathy मा एक विचार विकार छ।
सोचाइ को गतिशीलता प्रभावित विकार
मानसिक गति, स्थिरता र spontaneity को विविधता भएको आत्मपुरक वास्तविकता प्रतिबिम्बित प्रक्रिया को गतिशीलता चिनारी। त्यहाँ सोच को गतिशील पक्ष उल्लङ्घनको सुझाव धेरै संकेत हो।
स्लिप। सामान्यकरण गुमाउने बिना केहि बारेमा सामान्य र क्रमिक तर्क मा, विरामीहरु पूर्ण अन्य कुराहरू बारे कुरा गर्न सुरु गर्नुहोस्। तिनीहरूले अयोग्य संगतले वा राइम्स सोच, अघिल्लो एक पूरा बिना अर्को विषयमा धकेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी सामान्य रूपमा यस्तो आरक्षण संवेदन। किनभने यो प्रक्रिया को विचार को सामान्य र तार्किक रेल भङ्ग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया। जो प्रक्रिया एक विरामी सबै बाह्य stimuli सुनिरहेका छ। उहाँले पहिलो critically र उचित तर्क हुन सक्छ, तर, जो मदत वा भाग लिन बिल्कुल आवश्यक छ हात मा सामाग्री चेतन विचार गर्न तिनलाई किस्मत रूपमा त बिल्कुल सबै stimuli लिन। त्यस्ता मानिसहरूलाई ठाउँ र समयमा disoriented प्राप्त गर्न सक्छन्।
असंगत। बिरामी व्यक्ति फरक असंगत इन्साफ छ। सोचाइ आधारभूत गुण संरक्षण गर्दा। एक व्यक्ति लगातार विश्लेषण र synthesize, तार्किक न्याय व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो विकृति भास्कुलर रोग, मस्तिष्क चोट लागेको, TIR मानिसहरूलाई धेरै साधारण छ, र यो रोग को कुल संख्या को बारेमा 14% लागि पागलपन मा विकार, तर खाता लाग्यो छ।
Inertness। जब जस्ताको तस्तै कार्य र विचार प्रक्रिया-paced कार्य को सुविधा र इन्साफ एकदम धीमा। अर्को कार्य स्विच, लक्ष्य, छैन बानी बाहिर कार्य गर्न एक व्यक्ति लागि अत्यन्तै कठिन छ। अक्सर inertia मिर्गी संग मान्छे मा, एमडीएस psychopathy epileptoid र निराशा, बेपरवाह, adynamic राज्य सँगसँगै हुन सक्छ हुन्छ।
प्रवेग। धेरै छिटो विचारै, पनि आवाज असर जो न्यायलाई (सक्नुहुन्छ कर्कश किनभने बोलीको स्थिर प्रवाह को उहाँले) उदीयमान। यो रोग त्यहाँ एक व्यक्ति केही भन्छन्, यो पनि इशाराहरू, विचलित, कैच छ र विचार र associative सम्बन्ध तल्लो गुणस्तर व्यक्त एक वृद्धि emotionality छ।
यसलाई के मतलब विकार व्यक्तिगत घटक गर्छ?
विचार विकार द्वारा विशेषता सोचाइ व्यक्तिगत घटक मा असामान्यताहरु भएका मान्छे, लागि तल वर्णन गरे।
बहु। के, निष्कर्ष "स्थित" हुन सक्छ मान न्याय विचार विभिन्न विमानहरु छ। एक व्यक्ति संग सुरक्षित गर्दा विश्लेषण, संश्लेषण र तुलना कुनै पनि कार्य प्रत्येक अन्य सम्बन्धित छैन भनेर दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं खाना हेरचाह गर्न आवश्यक छ कि बुझेर महिला बिरालो सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन र छोराछोरीलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कार्य र पर्याप्त ज्ञान, लक्ष्य र काम रोग तिर मनोवृत्ति छ।
तर्क-काट। यस्तो विकृति संग सोच मानिस "वैश्विक मुद्दाहरू सम्बोधन" उद्देश्य छ। अर्को बाटो मा निरर्थक तर्क को एक उल्लंघन भनिन्छ। एक व्यक्ति, आफ्नो eloquence खर्च गर्न सक्छन् निर्देशन विशेष कारण बिना व्यक्त zamudrenno छ।
अलंकृत। जब एक व्यक्ति केही भन्छन्, यो शब्दहरू र भावना धेरै बिताउनुहुन्छ। त्यसैले, आफ्नो भाषण मा, त्यहाँ गाह्रो कुराकानी गर्न बनाउन अतिरिक्त विचार हो।
Amorphousness। अर्को शब्दमा, यसलाई तार्किक सोच को एक उल्लङ्घन हो। यो व्यक्ति अवधारणाहरु र तिनीहरूलाई बीच तार्किक जडानहरू मा भ्रमित छ। Outsiders तिनले यसो भन्दै थिए कुरा बुझ्न सक्दैन। यो त्यहाँ व्यक्तिगत वाक्यांश बीच कुनै जडान छ जसमा अधिक खण्डीकरणको क्रमलाई सामेल छन्।
सोचाइ सामग्री - यो के हो?
सोच - सामग्री यसको सार छ, कि आधारभूत गुण को काम हो: एक तुलना, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, concretization, अवधारणाहरु, इन्साफ, inferences। प्रेरणा र कटौती - साथै, सामग्रीको अवधारणा दुनिया बुझ्न को तरिका पनि समावेश छ। यो उपकरणको आन्तरिक मानसिक प्रक्रिया विशेषज्ञहरु, थप र प्रकार: सार, दृश्य-सक्रिय र रचनात्मक सोच।
मानव मन बित्दै जसमा क्षरण Pathway विकार एक अलग वर्ग यसका सामग्रीहरू को विकृति छ। यस मामला मा, गुण तरिका भण्डार छन्, तर मन को Forefront मा अयोग्य न्याय, तार्किक जडानहरू र आकांक्षाओं जानुहोस्। यो वर्ग को विकृति विचार र कल्पना को विकार समावेश गर्नुहोस्।
मानिसहरूलाई मा Obessii
यी विकार अन्यथा Obsessions भनिन्छ। यस्तो विचार involuntary, स्थायी पकड एक व्यक्तिको ध्यान हो। तिनीहरूले मान यसको सिस्टम सँग जुध्न सक्छ यसको जीवन प्रतिबिम्बित छैन। ती किनभने, तिनीहरूलाई सक्दैन गर्न मान्छे भावनात्मक थकित, तर केही छैन। जुनूनी विचार, विचार आफ्नै रूपमा व्यक्ति द्वारा कथित, तर कारण तिनीहरूले एक व्यक्ति आफ्नो आक्रमण भोगिरहेका, सबै भन्दा भाग लागि हो कि, आक्रामक अश्लील, अर्थहीन छन् भन्ने तथ्यलाई गर्न। तिनीहरूले कारण दर्दनाक अवस्थामा वा जैविक क्षति गर्न उत्पन्न गर्न सक्छन् को prefrontal Cortex, Basal ganglia, cingulate gyrus।
Overvalued भावनात्मक विचार
बिगडा सोचाइ - यो जस्तो देखिने innocuous न्याय, तर तिनीहरूले एउटा छुट्टै रोग प्रक्रिया रूपमा पहिचान गरेका थिए। मनोविज्ञान र मनोरोग सँगसँगै overvalued विचार प्रारम्भिक चरणमा मनोवैज्ञानिक विधिहरू सही हुन सक्छ, यो समस्या सामना। यो विकृति संग एक व्यक्ति सोचाइ विशेषता भण्डारण छ, तर एक वा कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने विचार को एक सेट, उहाँलाई आराम दिन छैन। यो एक लामो समय को लागि मस्तिष्क मानव र भावनात्मक अड्केको थकित, आफ्नो मन मा सबै विचार बीचमा एक मूख्य स्थिति धारण।
विचार प्रक्रियाको एक विकार रूपमा नस्ल
व्यक्ति तर्क छ र प्रस्तुति यसको मान, वास्तविकता साझा यकिन छैन किनभने यो सोचाइ प्रक्रियाको एक सुप्रकाश उल्लङ्घन हो तर्क को व्यवस्था गर्न। रोगी आफ्नो दायाँ सोच्छ, र यो उल्टो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ।
Aerophobia। कारण र व्यावहारिक सल्लाह विमान द्वारा उड गर्न डराउनु कसरी छैन
प्रभाव Ringelmana: सामान्य जानकारी, र गणना को लागि एक सूत्र एउटा उदाहरण
समझ - यो के हो? आपसी समझ कसरी हासिल गर्ने?
बोली: बोली तंत्र। बोलीको Anatomical र शारीरिक तंत्र
आत्म-विश्वास कसरी विकास गर्ने?
Normanists र antinormanistov को हुन्?
अभिनेता Pirogov Kirill: जीवनी, रचनात्मकता, फोटो
एक राउन्ड अनुहार लागि मेकअप: विशेषताहरु
डरेन Anderton छ - "Spurs" को पौराणिक कथा
जहाँ Escherichia मूत्र मा कोलाई?
निद्रामा - निद्रामा प्रजाति। निद्रामा को रोग प्रकार
डीजल इन्जिन डी-160: उपकरण विनिर्देशों
के cesspit बारम्बार गर्न घर चयन?
सिफारिस पत्र कसरी लेख्न मा केही सुझावहरू
बच्चा दुखेको गोडा छ: कारण र उपचार